Isoftware-Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 6)
Uyenza njani iithonjana zamaxwebhu akho ukuba zivele
Isifundo esincinci sendlela yokwenza Ubuntu ubonise izithombisi zamaxwebhu eLibreOffice kwaye masibone umxholo ngaphandle kokuvula uxwebhu.
Ngaba unengxaki yokufaka iSpotify ku-Ubuntu? sikunika isisombululo
I-Spotify, namhlanje, yeyona nto ibalulekileyo yokusasaza emhlabeni. Ngoku kufuneka uhlaziye isatifikethi sakho osithembileyo kwiLinux.
Uyisebenzisa kanjani i-Facebook Messenger kwiPidgin
I-Facebook Messenger lukhetho oludumileyo lokunxibelelana nabahlobo bethu. Ngoku ungayisebenzisa ngombulelo wePidgin kwi-Facebook Purple.
Hlela imifanekiso yakho ngobungcali ngeFotoxx
Ifotoxx yinkqubo elula kwaye enobuchule yokuphinda ubambe ifoto eya kuthi ikuncede unike imifanekiso yakho ukubamba abafuna ukubanomtsalane ngakumbi.
Ixesha lokuhlaziya okanye lokuyeka iZiko leSoftware Ubuntu?
IZiko leSoftware Ubuntu linokuba yimbali kunyaka olandelayo, okanye iindaba zamva nje zithi. Ngenisa inqaku ukuze wazi ngakumbi.
Faka ingxelo yokugqibela yomdlali we-ExMPlayer
I-Exmplayer yinguqulelo eyandisiweyo yesidlali esinamandla seMPlayer esiza kukubonisa indlela yokufaka kwi-Ubuntu okanye kwiLinux Mint yakho kweli nqaku.
I-Scid, isixhobo esihle sokufunda ukudlala i-chess
I-Scid yidathabheyisi yechess engagcini ngokugcina imidlalo yechess kodwa ikwasebenza njengesixhobo sokufunda ukudlala i-chess.
Coca Ubuntu bakho nge-Ubuntu Tweak
Ubuntu Tweak sisixhobo esihle sokucoca Ubuntu bethu bezintsalela ezishiyekileyo ziinkqubo esizifakileyo kwinkqubo yethu ezingekhoyo
Ixesha lePopcorn kunye nohlobo lwayo lwe-beta 0.3.8
Senza uphononongo oluncinci lokuphuculwa kwenguqulelo entsha ye-beta 0.3.8 yexesha lePopcorn kwaye sichaza indlela yokuhlaziya le nguqulo.
Ezona nkqubo zisimahla zeemvumi
Sichaza indlela yokuqhagamshela i-gutiarra yakho okanye i-bass kwi-PC yakho nge-GNU / Linux kwaye sithetha ngeenkqubo ezilungileyo zeemvumi onokuzifumana kule nkqubo.
Uphengululo lweAtom 1.0: Umhleli wombhalo omtsha weGitHub
Uphengululo lomhleli omtsha wombhalo weAtom kwiGitHub. Sithetha ngezibonelelo zayo kunye nendlela yokuyifaka kwi-Ubuntu.
Kexi, imbangi yokuFikelela kweLinux sele ifikile kuhlobo 3
I-Kexi yindawo yogcino lwedatha eza ngokungagqibekanga kwi-Calligra kwaye ebonakala ngathi yeyona ilungileyo ilingisa ukusebenza kwe-Microsoft Access kodwa kwi-Ubuntu.
Isiteji seWayini, iwayini elawulwe ngeyona ndlela iphantsi kakhulu
Isiteji seWayini yifolokhwe yeWayini esekwe kwiWayini kwaye yenza uhlengahlengiso oluninzi kwiwayini ukuyilungisa kunye nokulungisa iibugs kwinkqubo.
Iinkqubo ezi-3 ze-ERP oza kuzisebenzisa ku-Ubuntu
Ku-Ubuntu zininzi iinkqubo ze-ERP oza kuzisebenzisa, nangona kunjalo zimbalwa kuphela ekufuneka uzisebenzise. Kule posi sithetha ngeenkqubo ezintathu ezidumileyo ze-ERP.
Fumanisa i-LiVES, umhleli wevidiyo onamandla ku-Ubuntu
I-LiVES sisixhobo sokuhlela ividiyo esenzelwe bobabini abasebenzisi be-amateur kunye nabasebenza kuyo. Sikufundisa ukuba uyifaka njani Ubuntu.
Faka ingxelo entsha yeSteam ku-Ubuntu
I-Steam yindawo yokugcina i-intanethi yevidiyo edlalwa yiValve. Inguqulelo entsha yomthengi wayo ikhutshiwe kwiLinux, funda ukuyifaka.
Uyifaka njani i-VirtualBox 4.3.28 kwi-Ubuntu
I-VirtualBox 4.3.28 ilapha, kwaye njengenguqulo entsha yesinye sezona zisombululo zidumileyo siza kukubonisa indlela yokuyifaka kwi-Ubuntu.
Faka inkqubo kaTATA ku-Ubuntu
Ithuba lokufayilisha irhafu lonyaka liqale kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo yiyo loo nto ilixesha lokufaka iNkqubo yePADRE ku-Ubuntu.
Ubuntu buya kutshintsha igama lomnatha wonxibelelwano
Ngophuhliso olutsha, kuvela izinto ezintsha, ezinje ngotshintsho lwenkqubo kumagama oqhagamshelo womnatha, utshintsho olungagqibelelanga okanye ukuvalwa
Timeshift, isixhobo sokufumana kwakhona Ubuntu
I-Timeshift sisicelo esilula sokugcina esithatha inkqubo kwaye siyibuyise injalo, ishiya inkqubo njengokubanjwa.
Khanyisa i-Chrome ngala maqhinga alula
I-Chrome iya isiba nzima kwaye inzima, ke sikuxelela uthotho lwamaqhinga oluya kusivumela ukuba sikhanyise i-Chrome yethu ngaphandle kokwenza ngaphandle kweChannel.
Guake, isiphelo sendlela oza kuthi sele uyazi
I-Guake yinto enomtsalane kwisiphelo sendlela yesiphelo sendlela eluncedo kakhulu kubasebenzisi abaphambili. Ngena ukuze wazi ngakumbi.
Izixhobo ezi-3 zokutshisa i-Ubuntu disc kwi-pendrive
Inqaku elincinci malunga nezixhobo ezintathu ezibalulekileyo nezasimahla ukuze ukwazi ukutshisa umfanekiso wediski yofakelo kwi-pendrive elula.
I-Widget yemozulu yeGis ihlaziyiwe ukuxhasa Ubuntu 15.04
Iwijethi yemozulu yeGis ihlaziyiwe nje ukuxhasa Ubuntu 15.04. Sikuxelela indlela yokufumana ingxelo entsha yalewijethi yemozulu iluncedo.
Isalathiso seSysMonitor ngoku siyafumaneka kwi-Ubuntu 15.04
Inguqulelo entsha yeSalathi SysMonitor ngoku sele ikulungele ukusetyenziswa ku-Ubuntu 15.04. Sikuxelela iindaba zayo kunye nendlela yokuyifaka ngokulula nangokukhawuleza.
ILibgcrypt11 yenza iSpotify kunye neebakaki zingasebenzi kwi-Ubuntu 15.04
Ukunqongophala kwelayibrari ye-libgcrypt11 kwindawo yokugcina izinto kwenza ukuba iiSpotify okanye iiBhakethi zingasebenzi ku-Ubuntu 15.04 nokuba zifakiwe.
Utshintsha njani usetyenziso olungagqibekanga ku-Ubuntu
Ubuntu ikwasivumela ukuba sitshintshe kwaye simisele usetyenziso olungagqibekanga, kulula kakhulu ukwenza, kuya kufuneka ulandele amanyathelo kwesi sifundo.
I-Tomahawk ngumdlali womculo odibanisa ne-Ubuntu yethu enika ithuba lokulawula iinkonzo zethu zomculo ngokusasaza.
Faka uCorebird, umxhasi onamandla we-Twitter kwi-Ubuntu yakho
Isifundo esincinci sendlela yokufaka i-Corebird, iklayenti elinamandla nelilula le-Twitter elingekho kwindawo yokugcina esemthethweni Ubuntu Utopic Unicorn.
Faka uhlobo olutsha lweGeary kwi-Ubuntu
IGeary sisicelo esingagqibekanga seposi se-Elementary OS, kwaye luphuhliso olwenziwe nguYorba, okwabizwa ngokuba yiShotwell. Faka inguqulelo yayo yamva nje.
Ungasisebenzisa njani isikhangeli se-TOR ukugqitha kwiingozi zewebhusayithi
Ihlazo lokugqibela lokugenca libangele iinkampani ukuba ziqwalasele inkululeko yabasebenzisi bazo, oku kungasonjululwa ngesikhangeli se-TOR.
Faka iArduino IDE kwi-Ubuntu yakho kwiiprojekthi zakho kunye neArduino
I-Arduino IDE isebenza ngokugqibeleleyo ku-Ubuntu, ngendlela enokuthi siyifake kwisiphelo kwaye ngexesha elifutshane senze iinkqubo zethu zeArduino.
Abaqhubi be-Intel Linux Graphics sele benenkxaso ye-Ubuntu 14.10
I-Intel isandula ukuvuselela i-Intel Linux Graphics Drivers ukuxhasa Ubuntu 14.10 kunye neFedora 21, iinguqulelo ezinzileyo zakutshanje zosasazo.
Tilda, i-terminal yangoku iya kuba kwi-Ubuntu MATE 15.04
UTilda sisiphelo sendlela esiya kusetyenziswa ngu-Ubuntu MATE ngokungagqibekanga kwaye sikhawuleze kunesiphelo esiqhelekileyo. UTilda unonxibelelwano oluphambili.
Ungawenza njani amashini anyaniweyo kwiVMWare Workstation 11
Nje ukuba iVMware Workstation ifakwe, siza kubona ukuba singayisebenzisa njani ukwenza oomatshini ababonakalayo kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza.
I-Wallch, enye indlela eya kwiNdawo eyahlukileyo yokutshintsha iphepha lodonga
IWallch ngumtshintshi wephepha lodonga oluzenzekelayo ngokufana nokwahluka, kodwa enomahluko othile. Yifumanise apha.
Kukhululwe i-3.6, yifake kwi-Ubuntu yakho
Omnye wabadlali ababalaseleyo beLinux, ophicothayo, ukhuphe ingxelo entsha. Sikuxelela into ekufuneka uyenzile ukuze ube nayo kufakelo lwakho Ubuntu.
Pinta Umhleli Wezithombe, enye indlela yeFotohop kunye neGIMP
I-Pinta Image Editor ngumhleli womfanekiso ongasetyenziswanga esinokuwusebenzisa ukubuyisela imifanekiso ngendlela ebaluleke kakhulu njengenye ye-GIMP kunye ne-Photoshop.
Uyifaka njani iJava 9 kwi-Ubuntu
Sichaza indlela yokufaka ingxelo yokufikelela kwangoko kweJava 9 ku-Ubuntu ngokukhawuleza nangokulula. Indlela kunye nokuqwalaselwa okuthile kweli nqaku.
Fumanisa ukuba ubukela njani iividiyo zeYouTube kwisiphelo sakho
Namhlanje siza kukubonisa indlela yokubukela iividiyo zeYouTube ngokusebenzisa itheminali kunye nokusebenzisa imiyalelo. Njengamaxesha onke, i-terminal enamandla isinika isimanga.
I-OwnCloud 8, isisombululo esitsha kwilifu 'lasekhaya'
I-OwnCloud 8 yinguqulelo entsha yale nkqubo ithandwayo esivumela ukuba sibe nesisombululo seLifu esilula kunye nesenzelwa ekhaya, ngaphandle kokuhlawula okanye ukuba yincutshe enkulu.
Uyenza njani iNetapp webapp
INetflix yinkonzo eyonwabisayo yokusasaza, inkonzo esinokuthi siyonwabele kubulela uBuntu bethu kwi-webapp eyenziweyo.
Bangaphi abantu abakwi nethiwekhi ye-Wi-Fi? (Ukucaciswa)
Isifundo sokujonga ukuba singenelele na kwinethiwekhi yeWifi siphakamise iimpikiswano ezininzi, ke ngoko esi sithuba sicacisa amanqaku aliqela aphikisayo.
Bangaphi abantu abakwi nethiwekhi yethu ye-wifi?
Ukuba sino-Ubuntu sinokwazi ngemiyalelo emibini ukuba ngubani okwinethiwekhi yethu ye-Wi-Fi kwaye ukuba kukho umntu othabatha izibonelelo kunxibelelwano lwethu lwe-intanethi.
I-PdfMasher okanye indlela yokuguqula i-pdf ibe yi-epub
Zininzi izixhobo ezisivumela ukuba siguqule amaxwebhu e-pdf kwiifayile ze-epub kodwa yiPdfMasher kuphela esivumela ukuba siququzelele kwaye sikhethe kwinkqubo nganye.
Ubuntu Core, ukubheja Ubuntu kwilifu
Ubuntu Core kukuzibophelela kuka-Ubuntu kwinkqubo ye-Cloud kwaye uyonwabele inkqubo yayo entsha yokupakisha, ngaba iya kusebenza kakuhle?
I-Bitcoin izinzile emva kokunyuka, oku kuye kwenza ukuba kuqondwe kakuhle nge-Ubuntu ngokusebenzisa izikhwama kunye nesoftware yezemigodi.
Bonisa iKhalenda yakho kaGoogle kwidesktop kunye neConky
Enkosi kuConky noGcalcli sinokubonisa kwaye sihambelane neKhalenda yethu kaGoogle kunye nedesktop yethu kwaye siyenze ngendlela ephantse ingazisebenzisi izixhobo.
Yonwabela ezona Windows zibalaseleyo kuhlaziyo lwePlayonLinux
I-Playonlinux yinkqubo esebenzisa iwayini kunye nokuyiqhelanisa nomsebenzisi we-novice ukuze akwazi ukusebenzisa iinkqubo zeWindows ku-Ubuntu. Inguqulelo yayo yamva nje iphumelele kakhulu
Uyifumana njani i-OneDrive kwi-Ubuntu desktop
I-OneDrive yinkonzo yeMicrosoft yeLifu ngoku enenkqubo yomthengi yokuvumelanisa noBuntu, nangona iklayenti engekho mthethweni.
Faka i-LEMP kwi-Ubuntu Trusty Tahr
Isifundo esincinci sendlela yokufaka iserver ye-LEMP kwi-Ubuntu Trusty Tahr yethu, enye indlela kwiLAMP yesiko yeeseva ze-Apache.
Izixhobo ezi-3 zokuphucula imveliso yethu ku-Ubuntu
Inqaku elimalunga nezixhobo ezintathu eziza kusinceda sandise imveliso yethu ukuba sisebenzisa izixhobo ezithandwayo zeGets Things Done kunye nePomodoro.
Yenza indawo yokugcina yeephakeji ze-LTS zeLubuntu
Thumela malunga nokwenza ugcino olukhethekileyo lweLubuntu apho kuya kubakho uhlaziyo kunye nesoftware ekhuselekileyo yenguqulo yeLTS kaLubuntu.
Thumela ngendlela yokujonga esweni amanethiwekhi enkosi kwisoftware yeepoptes, isoftware esivumela ukuba sibeke esweni nayiphi na inethiwekhi yasimahla.
Yintoni omele uyenze emva kokufaka Ubuntu 14.04?
Isifundo esincinci se-newbies kwinto oyenzayo emva kokufaka Ubuntu 14.04, inguqulelo yamva nje ye-Ubuntu ukuze ihambelane ne-Windows XP emnyama.
I-TLP, isixhobo sokwandisa ibhetri yelaptop yethu
Inqaku malunga ne-TLP, isixhobo esingakholelekiyo esivumela ukuba sigcine ibhetri yelaptop ngokuguqula indlela yokuziphatha kwehardware kunye noBuntu.
Ubuntu inokuba nesona sikhangeli silungileyo kwihlabathi kunye neyakho
Iindaba malunga nokwenziwa kwesikhangeli sayo ngu-Ubuntu, kwingqungquthela yokugqibela yoPhuculo lwe-Ubuntu.
Ulawula njani Ubuntu bethu kwithebhulethi yethu
Isifundo esincinci sendlela yokulawula i-Ubuntu desktop kwithebhulethi yethu, nangona inokusetyenziselwa ii-smartphones kunye nenkqubo eyahlukileyo yokusebenza.
I-Koala, isixhobo esifanelekileyo sabaphuhlisi
Inqaku malunga neKoala, isixhobo esifanelekileyo sonjiniyela wewebhu esiya kuthi sisebenzise iiprosesa kwi-Ubuntu yasimahla.
Sebenzisa Ubuntu kwii-Cafes ze-Intanethi
Inqaku malunga nokhetho esinalo lokuphumeza Ubuntu kwiivenkile ezikwi-Intanethi, ukusuka kwezona zilula ukuya kwezona zinzima. Soloko usebenzisa iSoftware yasimahla
Ungazifaka njani iipakeji ku-Ubuntu ngesandla
Isifundo sendlela yokufaka iiphakheji ngesandla kwi-Ubuntu, Oko kukuthi, oko kubizwa ngokuba kukuqokelela ikhowudi yemvelaphi yenkqubo kunye nokuyisebenzisa.
Ezinye iindlela zokwenza i-ebook ku-Ubuntu
Inqaku malunga nokhetho olufanelekileyo esinalo lokushicilela incwadi usebenzisa i-Ubuntu yethu. Phantse zonke zikhululekile kwaye ziyafumaneka ku-Ubuntu
Itreyi yerediyo, mamela ngokulula izikhululo zikanomathotholo ze-Intanethi
Itreyi yerediyo sisicelo esincinci esivumela ukuba simamele kwizikhululo zikanomathotholo ze-Intanethi ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwengxaki.
Google2ubuntu okanye indlela yokulawula Ubuntu ngelizwi
Inqaku malunga neGoogle2ubuntu esivumela ukuba samkele intetho ku-Ubuntu kwiGoogle Voice API, ngalo mzuzu yamkela isiNgesi nesiFrentshi.
Ukukhanya kuyadlula kwihlabathi leSoftware yasimahla ngesandla kunye no-Ubuntu
Iindaba malunga nokuqaliswa kwenguqulelo entsha ye-lIghtworks, ngeli xesha ngenkangeleko yenguqulo ye-Ubuntu kunye neSoftware yasimahla.
Uyicwangcisa njani imenyu kwi-Openbox ene-Obmenu
Isifundo esincinci sendlela yokuqwalasela okanye ukwenza imenyu elula kwi-Openbox, enkosi kwisixhobo se-obmenu esiguqula iimenyu.
Uyifaka njani i-Openbox ku-Ubuntu ukukhanyisa inkqubo yethu
Isifundo esincinci kufakelo lwe-Openbox, umphathi wefestile okhanyayo we-Ubuntu okhanyisela umthwalo kwinkqubo yethu.
Uyisebenzisa kanjani iPepper Flash kwiChromium
Isikhokelo esilula esibonisa indlela yokusebenzisa i-Pepper Flash kwiChromium ngendlela elula ngokongeza indawo yokugcina efanelekileyo.
IChromium ithi ndlela-ntle kwi-NPAPI kunye neFlash
UMax Heinritz ubhengeze ukuba iChromium iyayeka ukuxhasa ii-plug-ins ezisebenzisa i-NPAPI kwakamsinya nje ukuba kukhutshwe ingxelo 34, kubandakanya neFlash.
I-Screen Recorder elula, isixhobo sokwenza iscreencasting
Inqaku malunga neRekhoda yeScreen elula, inkqubo esivumela ukuba senze ushicilelo lobuchwephesha kwidesktop yethu simahla.
Uyifaka njani i-VirtualBox 4.3.4 kwi-Ubuntu 13.10 nangaphambili
Isikhokelo esilula esichaza indlela yokufaka i-VirtualBox 4.3.4 kwi-Ubuntu 13.10 -nokusasazwa okususelweyo- ukongeza indawo yokugcina esemthethweni.
Ukufaka iGoogle Chrome kwi-Ubuntu 13.10
Isikhokelo esilula esichaza indlela yokufaka iGoogle Chrome ku-Ubuntu 13.10 kunye nolwabiwo olususelweyo -Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, njl.
Indlela yokujonga imeko yebhetri yethu ku-Ubuntu
Isikhokelo esincinci sokwazi imeko yebhetri kunye nokwandisa ukuzimela kwebhetri yeLaptop yethu enoBuntu ngaphandle kwendleko.
Utshintsha njani indawo yamaqhosha efestile ku-Ubuntu
Isifundo esincinci sendlela yokutshintsha indawo yamaqhosha ukuvala, ukunciphisa kunye nokwandisa kwiifestile zoBuntu kwaye sisebenzela iDebian
Iibhulashi ezingama-850 zasimahla ze-GIMP
Umsebenzisi we-GIMP kunye negcisa uVasco Alexander wabelana noluntu ngepakethi engekho ngaphantsi kweebrashi ezingama-850 zesoftware eyaziwayo.
I-Eclipse kwi-Ubuntu. Uyifaka njani i-IDE ku-Ubuntu (II)
Inqaku elincinci malunga ne-Eclipse, i-IDE eyaziwayo kakhulu ngenxa yokhetho lwayo kuGoogle xa usenza i-Android kunye nokusetyenziswa kweli qonga.
I-Netbeans kwi-Ubuntu, uyifaka njani i-IDE kwi-Ubuntu (I) yethu
Isifundo esincinci sokufaka i-IDE kwi-Ubuntu yethu, ngakumbi i-IDE ebizwa ngokuba ziiNetbeans ezinelayisensi yasimahla kunye neplatform ezininzi.
IVLC 2.1.1 yongeza inkxaso yokulinga ye-HEVC kunye neVP9
Iqela lomphuhlisi weVLC likhuphe iVLC 2.1.1. Umdlali wemithombo yeendaba odumileyo ekugqibeleni unenkxaso ye-HEVC / H.265 kunye ne-VP9.
I-Canonical ifuna ukutshintshela ku-Ubuntu
Iindaba malunga nezinto ze-Ubuntu ezinokuthi iCanonical zitshintshe kwaye inokubhengeza kwiveki ezayo kwiNgqungquthela yoPhuculo loBuntu.
I-GNUPanel, isixhobo esifanelekileyo kwiseva yethu Ubuntu
Iindaba malunga ne-GNUPanel, isixhobo sokulawula ukusingathwa kweseva enelayisensi ye-GPL kwaye ecela imali yokubhala kwakhona ikhowudi yayo.
Iibakaki, iAdobe Dreamweaver entsha Ubuntu
Inqaku malunga nomhleli weBrackets, umhleli ovulekileyo weAdobe wokuphuhlisa iiwebhusayithi kunye nayo yonke itekhnoloji enxulumene nehlabathi lewebhu.
Uyibeka njani iLibreOffice ngeSpanish
Isifundo esincinci sokubeka iLibreoffice ngeSpanish kwiincasa ze-Ubuntu ezingafiki ngokungagqibekanga, njengoko kunjalo ngeLubuntu kunye neXubuntu.
Uyongeza njani inkxaso yemultimedia kwi-Ubuntu 13.10 kunye neencasa zayo
Ukuba ufuna ukudlala ividiyo kunye neefayile zeaudiyo ku-Ubuntu 13.10, kuya kufuneka ufake inkxaso yeefomathi zemultimedia.
I-Seafile, isixhobo esinamandla sokuba neLifu lobuqu
Inqaku malunga Seafile, isixhobo esinamandla esivumela ukuba sikhethe ukuguqula Ubuntu Server yethu ibe lilifu lomntu kunye nelabucala.
Iinkqubo ezi-3 zokuthatha inqaku ku-Ubuntu
Inqaku kwiinkqubo ezintathu zokuthatha amanqaku kwinkqubo yethu Ubuntu. Bobathathu bakhululekile kwaye banokufumaneka kwiZiko leSoftware Ubuntu.
I-Libreoffice kwisitayile se-Elementary OS
Isifundo esilula sendlela yokutshintsha isitayile kunye nokubonakala kweLibreoffice yethu ukuze ifane naleyo ye-Elementary OS, ukuba unolu hambo.
Inqaku malunga neenkqubo ezintathu zoBuntu zokufunda ukuchwetheza ngendlela ozifundisayo kwaye uhambe kakuhle xa uchwetheza ngebhodi yezitshixo
Isifundo sendlela esingqamanisa ngayo izikhangeli zethu zeFirefox ngesixhobo seFirefox Sync, esele sifakiwe kuzo zonke izikhangeli zeMozilla Firefox.
Guqula ii-icon zeLibreOffice
Isifundo ngendlela yokutshintsha umxholo we icon yeLibreOffice yethu ukuze uyenze ngokwezifiso. Iposi lokuqala kuthotho olunikezelwe kwiLibreOffice kunye nemveliso yayo
Bazisa ngenguqulelo entsha yeAvidemux
Inqaku malunga nohlobo lwamva nje lweAvidemux, 2.6.5, uguqulelo oluzisa uphuculo olubalulekileyo kunye nendlela yokuyifaka kwinkqubo yethu Ubuntu.
Uyenza njani iGoogle Drayivu njengediski yediski ku-Ubuntu
Isifundo esincinci sokuguqula iGoogle Drayivu kwiidiski yediski kwinkqubo yethu Ubuntu. Inkqubo iyafana neDropbox okanye Ubuntu One.
Uyifaka njani iDarling kwi-Ubuntu 13.04
UDarling ngumaleko wokuhambelana ovumela ukuqhuba usetyenziso lweMac OS X kwiLinux. Ukufakwa kwayo kwi-Ubuntu 13.04 kulula kakhulu.
Zonke ezokuKhuphela iVidiyo, khuphela iividiyo nakweyiphi indawo ngokulula
Yonke into yokuKhuphela iVidiyo sisicelo esivumela ukuba sikhuphele iividiyo kwiindawo ezininzi -YouTube, Dailymotion, Veoh… - ngendlela elula kakhulu.
Darling, OS X Izicelo kwiLinux
UDarling ngumaleko wokuhambelana ojolise ekubeni ngumgangatho kwinkxaso yesicelo seMac OS X, inkqubo yokusebenza kweApple, kwiLinux.
I-Nixnot 2, isisombululo sabasebenzisi be-Evernote
Inqaku lokufundisa ekufakweni kweNixnot 2, umxhasi we-Evernote ongasebenziyo osebenza kakuhle kwiinkqubo ze-Ubuntu kunye neGnu / Linux.
Isikhupheli sevidiyo se4K, khuphela iividiyo zikaYouTube ngokucofa kanye
Isikhupheli sevidiyo se4K sisicelo esincinci esivumela ukuba sikhuphele iividiyo zikaYouTube ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwengxaki.
I-App Grid iZiko leSoftware elilula kakhulu leBuntu
Isifundo esincinci kwiGridi yeApp, indlela esebenzayo kunye nekhawulezayo kwiZiko leSoftware Ubuntu ukufaka usetyenziso kwinkqubo yethu.
Ukukhanya ngaphambili okanye indlela yeSilverlight ku-Ubuntu
Isifundo esincinci kwiPipelight kunye nendlela yokuyifaka, inkqubo esivumela ukuba sisebenzise itekhnoloji yeMicrosoft yeSilightlight kwi-Ubuntu bethu
I-Tor okanye indlela yokujonga ngokungaziwayo kwiWebhu
Isifundo kwiTor isicelo esiya kuguqula lonke unxibelelwano loBuntu bethu kunxibelelwano olukhuselekileyo kwaye lusinike ukungaziwa esikufunayo.
Kufuneka wenze ntoni xa i-SMPlayer iyeka ukudlala iividiyo ze-YouTube
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo i-SMPlayer iyekile ukudlala iividiyo ze-YouTube ngenxa yotshintsho lwesiza. Inguqulelo yophuhliso sele inolungiso.
I-Sylpheed, umphathi we-imeyile ongasindi
Isifundo kuSylpheed, umphathi wemeyile onamandla osebenzisa izixhobo ezimbalwa, ezilungele oomatshini abadala kunye nabo bafuna ukufunda imeyile.
Uyifaka njani inguqulelo yeBlender yamva nje ku-Ubuntu 13.04
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo inguqulelo 2.68 yeBlender yapapashwa, kwaye kungekudala emva ko-2.68a. Inguqulelo yamva nje yale nkqubo kulula kakhulu ukuyifaka kwi-Ubuntu 13.04.
Khawulezisa uqhagamshelo lwakho lweintanethi kunye negama leBench kwi-Ubuntu
Isifundo sendlela yokukhawulezisa uqhagamshelo lwethu lwe-intanethi ngenkqubo yegama lebench kunye nokusetyenziswa kwedilesi ye-DNS esebenza kwinkqubo yethu kwaye iyisebenzisa.
Isikripthi, izikrini ezivela kwikhonsoli
Isikripthi sisixhobo seLinux esivumela ukuba sithathe izikrini ezikwi-console. Sichaza ukusetyenziswa kwayo kunye nezinye zeenketho zayo.
Umphathi weConky okanye indlela yokumisela iConky yethu
Isifundo sendlela yokufaka kunye nokusebenzisa umphathi weConky, umphathi osivumela ukuba siqwalasele uConky ngaphandle kokwazi ikhowudi okanye kufuneka siyilawule.
Ukufaka iTransmission 2.80 kwi-Ubuntu 13.04 kunye ne-12.10
Ukuhanjiswa kwe-2.80, enye yezona zinto zithandwayo kubathengi beBitTorrent kwiLinux, yakhutshwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ukufakwa ku-Ubuntu kulula kakhulu.
Uyifaka njani iGoogle Chrome ku-Ubuntu 13.04
Ukufaka iGoogle Chrome kwi-Ubuntu 13.04 kulula kakhulu, khuphela nje iphakheji efanelekileyo ye-DEB kwaye uyifake.
Isalathi Synapse sisalathiso sephaneli ye-Ubuntu kunye nephaneli ye-OS yokuqala. Inokuqwalaselwa njengenye indlela yeMac OS X yokujonga.
Ukufaka iGoogle Play yoMlawuli woMculo ku-Ubuntu 13.04
I-Google Play Music Manager ikuvumela ukuba uvumelanise kwaye ulayishe umculo wakho kwiGoogle Music. Ukufakwa kwayo ku-Ubuntu 13.04 kukhawuleza kakhulu kwaye kulula.
Uyenza njani iVLC ujongano lwewebhu
Isikhokelo esilula esichaza indlela yokwenza i-VLC web interface, esetyenziselwa ukulawula ukusetyenziswa kwezinye iifowuni kunye neekhomputha.
I-Rootkits ku-Ubuntu, indlela yokuzifumana
Inqaku elinomdla ngendlela yokufumana kunye nokucoca iingcambu zenkqubo yethu Ubuntu kwaye ube nenkqubo ekhuselekileyo ngakumbi kwi-pc yethu.
IDaxOS, ukuhanjiswa okuncinci
Ukungena okwenzelwe wena malunga neDaxOS, usasazo olusekwe ku-Ubuntu kodwa oluninzi lokwenza ngokwezifiso kunye nendlela eya kwinkululeko evela kwimvelaphi yaseSpain.
Uyilungiselela njani imifanekiso yePNG kwiConsole
I-OptiPNG sisixhobo esincinci esivumela ukuba sisebenzise imifanekiso yePNG-ngaphandle kokuphulukana nomgangatho- kwikhonsoli yeLinux. Ukusetyenziswa kwayo kulula.
INitro, isicelo solawulo lwemisebenzi kwiLinux
INitro sisixhobo esincinci sokulawula imisebenzi kwiLinux, OS X nakwiWindows. Ukusetyenziswa kwayo kubulela ngokulula kubume bayo obucocekileyo nobumnandi.
I-Alarm Clock, i-alamu efanelekileyo ye-Ubuntu
I-alamu Clock sisicelo esiluncedo kakhulu esinewotshi yealam kunye nesibali xesha, zonke zinokuqwalaselwa ngemiyalelo.
Ukudibanisa njani izaziso zeGmail kwi-Unity desktop
Uyenza njani inkqubo yokwazisa ye-Gmail kwidesktop yoBumbano usebenzisa i-Unity Mail.
Umhleli wePD PDF, umhleli opheleleyo wePDF
Umhleli wePD PDF, njengoko igama layo lisitsho, umhleli olula kodwa ogqibeleleyo wePDF eneempawu ezahlukeneyo kunye nokukhetha.
Ukukhanya kwesalathi, isibonisi ukutshintsha ukukhanya kwesikrini
Ukukhanya kwesikhombisi sisalathiso sokutshintsha ukukhanya kwescreen kwiphaneli Ubuntu. Ukusetyenziswa kwayo, njengokufakwa kwayo, kulula kakhulu.
I-Renamer, ubunzima bokuthiya ngokutsha iifayile kwi-Ubuntu
Ukuthiya igama kwakhona siskripthi esihlawulelweyo se-nautilus esenza ukuba kube lula kuthi ukuphinda siziqambe kwakhona iifayile ngokucofa kwiqhosha lasekunene lempuku.
ISystemback, esinye isixhobo esiluncedo kwii-backups kunye nokunye ...
ISystemback sisicelo esivumela ukuba senze inkqubo yokubuyisela amanqaku okanye senze iCD ebukhoma yenkqubo njengoko sinayo.
ImenyuLibre, umhleli wemenyu opheleleyo
ImenyuLibre isivumela ukuba sihlele izinto zemenyu yokusetyenziswa kwiindawo ezinje ngeGNOME, LXDE kunye neXFCE. Ikwaxhasa uluhlu olukhawulezayo loManyano.
Iskripthi sokufaka iMinecraft ku-Ubuntu
Sinika iskripthi esilula ukufaka iMinecraft ku-Ubuntu (12.04, 12.10 kunye ne-13.04), eya kuthi nayo idale isindululi esinoluhlu olukhawulezayo.
I-Geary, umxhasi we-imeyile olula kunye nenhle
I-Geary kulula kakhulu ukusebenzisa umxhasi we-desktop ukuba afunde ii-imeyile zethu ngenxa yombonakalo olula kunye nobuhle.
Ubuntu Mobile SDK: Uyenza njani iNkqubo.
Ukungena kokuqala kuthotho malunga nendlela yokwenza usetyenziso nge-Ubuntu Mobile sdk. Sifunda indlela yokufaka i-sdk, ide kunye nokuphuhlisa iHlabathi yeHlabathi.
Umbhalo ophantsi 2, isixhobo esikhulu seBuntu
Thumela malunga ne-Sublime Text 2, i-IDE kumaqonga awahlukeneyo anjengeBuntu. Izibonelelo zale IDe zenza ukuba ikhethwe ngabaphuhlisi abaninzi.
I-Scribus, isixhobo sokupapasha ku-Ubuntu
I-Scribus, inkqubo yokupapasha ku-Ubuntu. Isoftware ekwaziyo ukupapasha kunye nokuyila kunye nokukwazi ukuyithumela ngaphandle kwi-pdf ngaphandle kwengxaki
I-ClamTk: ukucoca intsholongwane ku-Ubuntu
I-ClamTk, i-antivirus evulekileyo evumela ukuba sibe ne-antivirus efanelekileyo kakhulu kwi-Ubuntu kwaye sibe nenkqubo ekhuselekileyo ngaphandle kokusongela
I-Nautilus Terminal, iplagi-in ukuze ube ne-console ehlala isondele
I-Nautilus Terminal yi-plug-in yeNautilus esivumela ukuba sibe nekhonsoli ebethelelwe ngaphakathi komphathi wefayile uqobo.
Ukuphindaphindwa kwamanqanaba ku-Ubuntu
Thumela malunga nokuRhoqo kweRhoqo ku-Ubuntu, indlela ekuvumela ukuba unciphise ukusetyenziswa kwezixhobo zekhompyuter okanye ilaptop eyisebenzisayo.
Thumela malunga nokwenziwa kwesiseko kweskripthi kwinkqubo yethu yoBuntu. Kubhalelwe abasebenzisi abangaziyo ukuba zeziphi na iincwadi zeempendulo.
Ubuntu yoKwenza ngokwezifiso kunye ne-cd-life
Ukungena kwendlela esinokuba nayo kwi-Ubuntu Customization Kit yethu inkqubo esivumela ukuba senze eyethu Ubuntu-cd cd.
Google Drayivu kunye nabaxhasi bayo Ubuntu
Thumela malunga neenketho ezikhoyo zokuba nenkonzo kaGoogle Drayivu ku-Ubuntu ngaphandle kwesikhangeli sewebhu.
IGedit, iProsesa okanye uMhleli weKhowudi?
Thumela malunga neGedit, umhleli wekhowudi kunye neprosesa yamagama eza kufakelwa ngokungagqibekanga kuhambiso lwe-Ubuntu kunye neGnome.
I-Synaptic, umphathi we-Debianite ku-Ubuntu
Thumela malunga nokunikezelwa kunye nokufakwa kweSynaptic. Umphathi wephakheji uzuze njengelifa kwi-Debian ngu-Ubuntu kwaye ngoku utyhalelwe ecaleni yi-Canonical.
Vmware Player isoftware yokwenyani ye-Ubuntu
Thumela malunga nokufakwa ku-Ubuntu kwenkqubo yeVmware Player evumela ukuba isebenzise iinkqubo ezisebenzayo kwezinye iinkqubo zokusebenza.
I-Thunar njengomphathi wefayile ku-Ubuntu
Iposi eluncedo ekufakweni kweThunar ku-Ubuntu kunye nendlela yokwenza le nkqubo isebenzise ngokungagqibekanga endaweni yeNautilus.
FBReader, yasimahla kunye nokuqwalaselwa ngokupheleleyo kwe-e-book reader
I-FBReader sisimahla, umfundi weencwadi ze-e-book okhululekileyo -ofumaneka kwiLinux nakwi-Android, phakathi kwabanye- kwaye unokuqwalaselwa ngokupheleleyo.
Ukunxibelelana kunye noomatshini abasebenzayo ku-Ubuntu
Thumela malunga nokwenza ubuchule kunye noomatshini ababonakalayo ku-Ubuntu. Imifanekiso ithathiwe kusetyenziswa iVirtualBox application enelayisensi yoMthombo ovulekileyo.
I-YouTube kwi-MP3, isixhobo sokukhupha iaudiyo kwiividiyo zeYouTube
I-YouTube kwi-MP3 Converter yinkqubo esivumela ukuba sikhuphe ngokulula iaudiyo kwiividiyo zeYouTube. Lonke uluhlu lokudlala lunokongezwa.
Umahluko phakathi kweLibreOffice 4.0 kunye neMicrosoft Office 2013
Funda ngumahluko phakathi kweLibreOffice 4.0 kunye neMicrosoft Office 2013 ngetheyibhile yokuthelekisa ethunyelwe kwiThe Document Foundation wiki.
Ukufaka ingxelo yokugqibela ye-OpenShot kwi-Ubuntu 12.04
I-OpenShot ngumhleli wevidiyo ongaqhelekanga weLinux. Kule posi sichaza indlela yokufaka ingxelo yokugqibela ye-OpenShot kwi-Ubuntu 12.04.
Uyifaka njani ingxelo yokugqibela yeLiferea kwi-Ubuntu
Isikhokelo esilula esibonisa amanyathelo afanelekileyo okufaka uhlobo lwamva nje lweLiferea, umfundi onamandla weRSS, kwi-Ubuntu 12.10 nakwiLinux Mint 14.
Ukufaka i-Intanethi Explorer 9, 8, 7 kunye no-6 kwiLinux
Iinguqu ezahlukeneyo ze-Intanethi Explorer zinokufakwa ngokulula kwiLinux ngeVirtualBox, eluncedo kakhulu kubaphuhlisi bewebhu.
Ubuntu: Ukubonisa uhlobo lokhuseleko lwe-Wi-Fi
Njengoko umphathi wenethiwekhi Ubuntu engabonisi uhlobo lokhuseleko kunxibelelwano lweWi-Fi, kungcono ukubhenela kolunye uhlobo olubizwa ngokuba yiWicd.
Ukufaka iiphakheji ze-DEB ngokukhawuleza nangokulula
I-GDebi sisixhobo esincinci esivumela ukuba sifake iipakeji ze-DEB ngokukhawuleza kwaye ngokulula ngaphandle kokumilisela iZiko leSoftware Ubuntu.
Ezona zi-10 ziphambili zikhutshiwe kwi-Ubuntu
Uluhlu olusemthethweni lwezona zicelo zilandwayo zilishumi zisuka kwiZiko leSoftware Ubuntu, lahlulwe laziintlu ezimbini, enye ihlawulwe kwaye enye yasimahla
Guqula iifayile ze-RPM ziye kwi-DEB kunye ne-vice versa kunye nePakeji yesiGuquli
Iphakheji yokuguqula izinto ujongano lomzobo wasemzini esivumela ukuba siguqule iintlobo ezahlukeneyo zeephakeji ngokulula okukhulu.
Imfonomfono yeMedia Media, eguqula ngokulula iifayile zeaudiyo nevidiyo
IMedia Media Converter yinkqubo esivumela ukuba siguqule ngokulula iifayile zeaudiyo nevidiyo ezilungele ukudlalwa kwiifowuni eziphathwayo.
Isihlokwana somhleli, ukwenza imibhalo engezantsi ngokulula
Isihlokwana somhleli yinkqubo evulelekileyo esinokuthi sibandakanye nemixholo engezantsi kwiividiyo zethu ngendlela elula kakhulu.
XnConvert, ukwenza inkqubo yebhetshi yemifanekiso kwiLinux
I-XnConvert sisoftware yomnqamlezo yasimahla yokuqhutywa kwemifanekiso, ukusuka apha sikubonisa ukuba ungayifaka njani kwi-Debian nakwi-Ubuntu.
Izicelo zeLinux App Finder kunye neenkqubo zokufumana iLinux
I-Linux App Finder iyinjini yokukhangela okanye umncedisi ukufumana umthombo ovulekileyo okanye izicelo zoMthombo ovulekileyo kunye neenkqubo.
Ukufaka i-XAMPP 1.8.1 kwi-Ubuntu 12.10
Faka ingxelo yokugqibela yeXAMPP-1.8.1 ngeli xesha lokubhala- kwi-Ubuntu 12.10 ngokongeza iPPA ehambelanayo.
Yenza i-eBook yakho ngeSigil
I-Sigil ngumhleli we-eBook we-eBook kunye nomthombo ovulekileyo ngokupheleleyo okanye uMthombo ovulekileyo, kwinqaku elilandelayo silifaka kwi-Ubuntu nakwi-Debian.
I-Blender 2.64a, imodeli, oopopayi kunye nokuyilwa kwemizobo emi-XNUMX.
I-Blender ngumhleli wemizobo emithathu enamandla, esinokuyikhuphela simahla kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza.
I-X-tile yinkqubo encinci esinceda ukuba siququzelele iifestile zethu. Isebenza nakweyiphi na imeko yendawo yedesktop kwaye inokuqhutywa kwikhonsoli.
Ii-sensors sisixhobo esincinci seLinux esinceda ukuba sijonge ubushushu beCPU yethu, phakathi kwezinye izinto.
Umdlali weNuvola kwiLinux Spotify
Umdlali weNuvola ngumdlali wesimbo seSpotify olungiselelwe iLinux kunye neenketho ezininzi zoqwalaselo.
I-PlayonLinux, okanye indlela yokufaka ngokulula imidlalo yeWindows kunye nokusetyenziswa kwiLinux
I-PlayonLinux ujongano olupheleleyo lweWayini engancediyo ukufaka imidlalo kunye nesoftware ehambelana nayo yeWindows
Faka i-VirtualBox 4.2 kwi-Ubuntu 12.04
Faka ingxelo yokugqibela yeVirtualBox, 4.2, kwi-Ubuntu (Kubuntu, Xubuntu, njl.) 12.04.
Unogumbe, umxhasi weBitTorrent ongasindiyo kunye nolula
Unogumbe ngumthengi olula weBitTorrent osebenzisa umbulelo omkhulu ngokusetyenziswa kweeplagi.
Shutter, skrini ye-Ubuntu ngeendlela ezininzi
I-Shutter yi-grabber yesikrini enezinto ezininzi onokukhetha kuzo kunesiqhelo kwi-Ubuntu 12.04
I-Flowblade, umhleli wevidiyo olula nonamandla
I-Flowblade ngumhleli wevidiyo kwiLinux ebonelela ngokuqina kunye nokusebenziseka ngokufanayo. Ukufakwa kwayo kulula kakhulu.
Yenza ngokwezifiso imibala yemixholo yeGTK
Yenza imibala yemibala oyithandayo yeGTK2 kunye nemixholo ye-GTK3 ngesixhobo sokukhetha soMxholo weGTK.
Faka iChromium kwiKubuntu 12.04
Faka iChromium kwiKubuntu 12.04 ngemizobo kunye neMoon okanye kwiConsole ngomyalelo olula.
Faka i-Opera 12.02 kwi-Ubuntu 12.04
Faka i-Opera 12.02 kwi-Ubuntu 12.04- kunye nolwabiwo olususelweyo-ngokongeza indawo yokugcina esemthethweni yaseNorway.
IFirefox 15: Khubaza ujongano lokujonga iplagi
Khubaza iplagi-yokuhambelana kokutshekisha kwiFirefox ngokukhetha isikhangeli esiphambili.
Yenza eyakho Ubuntu ngo-Ubuntu Builder
Ubuntu Builder ikuvumela ukuba wenze eyakho inguqulelo Ubuntu ngokwezifiso izinto ezinje ngemeko-bume yedesktop, usetyenziso kunye noovimba
I-Epiphany Web Browser, esona sikhangeli sewebhu silula kunazo zonke iGnome
I-Epiphany sisikhangeli sewebhu esivulekileyo kunye nolunye uhlobo olulungileyo kwiibhrawuza ezinkulu zewebhu
IBleachBit, yikhulule indawo kwihard drive yakho
I-BleachBit sisixhobo esikuvumela ukuba ucime iifayile ezingafunekiyo okanye esingasazifuniyo.
Fomatha iJunkie, uguqule ividiyo kunye nevidiyo ngokulula
Guqula ngokulula iividiyo ku-Ubuntu ngokufaka iFomathi yeJunkie, ividiyo, iaudiyo kunye nokuguqula imifanekiso.
Iwayini kwi-Ubuntu 12 04 yokufakwa kunye noqwalaselo olusisiseko
Isifundo esilula sokufaka iwayini kwi-Ubuntu 12 04 okanye nayiphi na i-Linux esekwe kwi-Linux distro
Uyibuyisela kanjani kwakhona inkqubo yakho ku-Ubuntu 12 04
Ukugcinwa kwesicelo yi-Ubuntu 12 04 yesicelo esiza kuxhasa iirejista ezikhethiweyo
Uyenza njani i-CD ebukhoma kwi-Linux distro kunye ne-Unetbootin
Uyisebenzisa kanjani i-Unetbootin kwi-Ubuntu 12 04 ukwenza i-Linux Live CD
I-XBMC iziko lemultimedia leLinux
I-XBMC liziko lemithombo yeendaba simahla kunye noMthombo oVulekileyo. Nge-XBMC siya kulawula lonke icandelo le-multimedia lePC yethu.
Iinkqubo ezibalulekileyo ze-Ubuntu 12 04 2nd part
Inxalenye yesibini yoluhlu lweenkqubo eziyimfuneko kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza exabisa ityuwa yayo, ngakumbi Ubuntu 12 04
Iinkqubo ezibalulekileyo ze-Ubuntu 12 04 1nd part
Uluhlu lwakho lweenkqubo ezingafanelekanga ukuba zilahleke kwi-Ubuntu 12 04 yakho
I-OpenShot umhleli wevidiyo yasimahla yeLinux
I-OpenShot ngumhleli wevidiyo okhululekileyo nogqibeleleyo, esiza kuthi senze ngayo ukuhlelwa kweevidiyo phantse zonke.
Uyisasaza njani isoftware yethu ku-Ubuntu nakwezinye ii-distros
Ukuba ngaba badwelisi benkqubo okanye hayi kwaye ufuna indlela yokufaka usetyenziso okanye iskripthi, nazi iindlela ezininzi.
[Icebiso] Ungabuyela njani kuseto olungagqibekanga kuManyano
Ukuba emva kokufunda amangeniso ngokhetho lobumbano lobumbano "ubudlala" ngenkqubo yakho kwaye awuninzi kakhulu ...
Zama Ubuntu 11.04 kwi-Intanethi
Xa kwabhengezwa ukuba inkonzo ye-Canonical's Shipit yayiza kuphela, kwa esi sibhengezo sikwathetha malunga ...
I-BackUps evela kwisiphelo esine-script kwi-Bash Shell
Nge-14 kaFebruwari, ndafumana upapasho lukaSimrat Pal Singh Khokhar kwiLinux.com, apho athi thaca iscript ...
Yazi imeko yebhetri yesiphelo
Enye yezinto ezixhalabisayo kuthi sonke esisebenza kwilaptop kukuba sinebhetri eninzi esele phambi kokuba ilaptop ivale kwaye imveliso yethu iphele ngesiquphe. Kungenxa yoko le nto sigcina iso elibukhali kwisicelo esizisa imeko-bume ye desktop apho sinokubona khona ingxelo engeyonyani malunga nexesha elingakanani esisele nalo kwibhetri. Nditsho ngokungekho ngqiqweni ngenxa yokuba rhoqo imizuzu engama-30 yebhetri imalunga nemizuzu eli-10, nangaphezulu ukuba kwezo ngcinga imizuzu engama-30 ikunike ukuba wenze into echitha izixhobo ezininzi zomatshini wakho.
Ngaphandle kokusinika idatha engeyiyo, ezi zicelo zincinci zinomda ngokulula, zingasiniki lwazi longezelelekileyo, into endikhathazayo, kuba ndiyathanda ukwazi ukuba ibhetri yam injani, hayi nje ukuba ingakanani imizuzu engeyonyani endishiyekileyo.
4 Useto lweConky oqinisekileyo ukuba ungaluthanda
Ukhuphelo _HUD Ukukhuphela kunye nemiyalelo yokuthotywa kwemithwalo ukukhuphela kunye nemiyalelo conky_grey Ukukhuphela kunye nemiyalelo conky_orange Ukukhuphela kunye nemiyalelo yokufaka ikhonkco…
Izinto ezili-10 ndizithanda kakhulu ngeFirefox 4 entsha
Uninzi lwenu sele nilwazi, ingxelo yokugqibela ye IFirefox 4, kulindeleke ukuba ikhutshwe ngasekupheleni kukaFebruwari, kwaye izolo nje i-beta 9 yesi sikhangeli silindelweyo sikhutshiwe esenza ukuba kufanelekile ukuba ibe sisikhangeli sam esingagqibekanga.
Ngesi sizathu, apha ndenza uluhlu lwezinto ezili-10 endizithanda kakhulu ngeFirefox 4, enokuthi indenze nditshintshele kwiFirefox Google Chrome Ekupheleni kwenyanga ezayo.
I-WDT, isixhobo esimangalisayo sabaphuhlisi bewebhu
Linux Ayinazo izicelo ezininzi ezinceda kakhulu xa usenza amaphepha ewebhu, kwaye oku kuthetha ukuba izicelo ezibonelela ngezixhobo ezinceda ukugcina ixesha xa ubhala ikhowudi, kuba phantse zonke ezo zihlala zikhona zibonelela ngeendlela zokulungisa kunye nokubhala ikhowudi, endaweni yoko ngaphezu kokubonelela ngendawo esingqongileyo WYSIWYG.
Ngethamsanqa ikhona WDT (Izixhobo zoPhuculo lweWebhu), Isicelo esinamandla esivumela ukuba sivelise ngokukhawuleza kwaye ngokulula izitayile kunye namaqhosha CSS3, itshathi usebenzisa iGoogle API, jonga i-imeyile ukusuka inbox, Guqulela isicatshulwa kunye Isiguquleli sikaGoogle, Yenza imidwebo ye vector, i-backups yedatha kunye nexesha elide kakhulu (elide kakhulu nzulu) njl.
Uyifaka njani iHamachi ku-Ubuntu kwaye ungafi uzama
Uyifaka njani iHamachi ku-Ubuntu kwaye ungafi uzama Ukuhlaziya i-04/05/2011 Ngalesi sikhokelo sincinci sinokufaka i-hamachi ...
QInk, jonga inqanaba le-inki lomshicileli wethu ku-Ubuntu
I-QInk sisicelo esisinceda ukulawula inqanaba lomshicileli kwi-Ubuntu, into ethi ...
I-ClipGrab, khuphela iividiyo ezikwi-intanethi kubuntu
I-ClipGrab sisicelo sasimahla phantsi kwelayisensi ye-GPL esetyenziselwa ukukhuphela iividiyo ezikwi-Intanethi kwiinkonzo ezahlukeneyo, isicelo siyayixhasa ...
Yenza uphawu lwe-Ubuntu nge-Inkscape
Isifundo sevidiyo esinomdla esenziwe ngabantu be-Ubuntu Nicaragua njengenxalenye yeprojekthi yabo uPildoras Ubunteras, ngeli xesha ...
Faka eyakho iVPN Server nge-OpenVPN kwi-Ubuntu 10.04 Server
Faka eyakho iVPN Server nge-OpenVPN kwi-Ubuntu 10.04 Server ATTENTION Emva kwethutyana ngaphandle kokuthumela ...
mdf2iso, guqula imifanekiso ye-MDF iye kwi-ISO kwiLinux
Izolo ndifumene umfanekiso we-CD ekufuneka ndiwurekhodile owawuluhlobo lweMDF ke ...
Lungisa iRhythmbox iingxaki zokuvumelanisa- i-iPhone okanye i-iPod
URhythmbox kutshanje uye waba ngowona mculo usasazwayo kunye nomculo osetyenziswa kakhulu kwi-Ubuntu. Kodwa…
Faka iRalink RT3090 kwi-Ubuntu
Makhe sicinge ngale meko ilandelayo, uthenga iLaptop kwaye ufake Ubuntu kwaye ayiyiboni iNethiwekhi engenazingcingo okanye iWifi, okanye mandundu i-Lan okanye i-Cable network nayo ayifunyanwa, kungenxa yokuba ezo chips zisebenzisa abaqhubi abanini kwaye azifakwanga Kwi-kernel yobuntu, ke kuya kufuneka uzifake njengokongezwa, ngokwamava am ii-laptops ze-MSI zinazo le-rt3090 chip.
Ukujikeleza ii-Wallpaper ku-Ubuntu
Kulabo bathanda mna banengqokelela ebanzi yamaphephadonga kwaye abafuni kutshintsha lonke ixesha ...
Izicelo ezi-5 zoLawulo loMfanekiso
Ubuntu Lucid Lynx iqulethe i-F-Spot engagqibekanga, umphathi onobuqili kunye noluncedo. Kodwa kuthi kuthi abo banomdla ...
Kubuntu 10.04, umphathi wenethiwekhi ukhubazekile, isisombululo
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndafaka uKubuntu 10.04 kwincwadana yam yomfazi, yonke into yahamba ngokumangalisayo kwiintsuku ezimbalwa, ...
I-CV elula-Ukubhala iCV yakho ku-Ubuntu
I-CV elula ye-2 sisicelo esenziwe nguJuancarlopaco okwangumbhali wesicelo seRadioGUI ...
Isikhangeli seChromium ngeSpanish kubuntu
Kwiintsuku ezimbalwa bendisebenzisa iChromium ngakumbi kwi-netbook, kuba ndiyifumana ilunge ngakumbi kwaye ...
I-GIMP 2.6.8, .deb iphakheji ye-Ubuntu
Inguqulelo ye-GIMP 2.6.8 iyafumaneka kwaye singayifaka ku-Ubuntu enkosi kwi-Getdeb ukuba ufake Ubuntu ...